MAR 31 PM Uploaded by newspodcasts at Your Listen
This music and or audio is not accessible due to copyright violations ."မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ � ..." has been removed due toacopyright notification. Keep exploring! You can find more similar and music and audio here - MAR 31 PM
မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ ညပိုင်း RFA သတင်းများ
၁၊ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် ဧပြီလအတွင်း လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်လို့ သမ္မတပြောကြား
၂၊ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် မူကြမ်း လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မှု ကုလသမဂ္ဂ ချီးကျူး
၃၊ ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှေ့ အကြမ်းဖက်ခံရမှု အစီရင်ခံစာ သမ္မတဆီတင်မည်
၄၊ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ကျောင်းသားတွေ ပြန်လွတ်ရေး NNER နဲ့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့တွေ ဆွေးနွေးမည်
၅၊ အကြမ်းဖက်သမားတွေ ဝင်ရောက်မယ့်သတင်းကြောင့် လုံခြုံရေးသတိရှိဖို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ညွှန်ကြား
၆၊ ဝှိုက်ကဒ်လက်မှတ် ပြန်အပ်နှံမယ့်နေရာတွေ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖွင့်လှစ်သွားမည်
၇၊ ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဝန်ကြီးဌာနတွေ အသုံးစရိတ် နှစ်ရာခိုင်နှုန်းဖြတ်တောက်ဖို့ လွှတ်တော်ဆုံးဖြတ်
၈၊ သမ္မတအိမ်တော်မှာ မနက်ဖြန်ကစပြီး သတင်းယူခွင့်ပေး
Ht: Len Mccluskey 28 Mar 12 by newspodcasts 00:00:00 5071
Povcj: Princes Into Battle 07 Mar … by newspodcasts 00:09:08 6213
Rev Economics (21 Mar) by shoffe 01:33:36 351
Rev Accounting (28 Mar) by shoffe 00:44:32 438
Rev Economics (26 Mar) by shoffe 00:30:00 357